ယောင်္ကျားလေးတိုင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ မောင် နဲ့ မ ဇာတ်လမ်း - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ယောင်္ကျားလေးတိုင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ မောင် နဲ့ မ ဇာတ်လမ်း
ယောင်္ကျားလေးတိုင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ မောင် နဲ့ မ ဇာတ်လမ်း
Apann Pyay 4:48 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
“ခဏပါကွာ…. ဆယ်မိနစ်.. ဆယ်မိနစ်..ပဲ...” ” မောင်ကလဲကွာ .... နေ့စဉ်လုပ်နေကြအစီအစဉ်တို့အတိုင်း မနက် ငါးနာရီခွဲတွင် ထကာ မောင်အတွက် နံနက်စာကို ပြင်ဆင်ထားသည်။ နေ့လည်စာ အတွက် ထမင်းဘူးထည့်ရန် ထမင်းအိုးကို ခလုတ် နှိပ်ထားလိုက်သည်။ မနေ့ ညနေက ချက်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားသော ကြက်သားဟင်းကို မိုက်ကရိုဝေ့(ဖ်) လျှပ်စစ် မီးဖိုထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ ခလုတ်ကို နှိပ်ထားလိုက်သည်။ ခြောက်နာရီတွင်မောင့်ကို အနမ်းဖွဖွလေးဖြင့် နိုးထစေသည်။ မောင်က အိပ်နေလျှင် စူစူလေး ဖြစ်နေသော နှုတ်ခမ်းလေးကိုမျက်နှာသစ်ပြီးစ ကျွန်မပါးလေးနှင့် ထိကပ်လိုက်သော အခါတွင်..” မ.. ခြောက်နာရီ ထိုးပြီလားကွာ…အိပ်ရေး မဝသေးဘူးကွာ…” “ထိုးနေပြီ.. ထတော့ဆရာ… အလုပ်နောက်ကျ နေအုံးမယ်…” “ခဏကွာ…. ဆယ်မိနစ်.. ဆယ်မိနစ်..” ” မောင်ကလဲကွာ မနက်ဖြန် စနေပဲ ရောက်တော့မယ်.. စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှ ဝအောင် အိပ်နော်” ကျွန်မ အတင်းနှိုးသော အခါမှ မောင်သည် သူ့ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ဆန့်တန်းကာ ဝါးခနဲ တစ်ချက် သမ်းလိုက်ပြန်သည်။
ကျွန်မက လက်နှစ်ဖက်ကို တန်းကာ ပေးလိုက်တော့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို ပေကပ်ကပ် လုပ်နေပြန်သည်။ နောက်တော့ ရုတ်တရက် ထထိုင်ကာ “မောင် မျက်နှာသစ် ရေချိုးတော့မယ်..မ မီးဖိုမှာ လုပ်စရာရှိစရာ သွားလုပ်တော့” ဆိုကာ ကျွန်မ နဖူးလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့် ထိကပ်ကာ နမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်မလည်း အိပ်ခန်းမှ ထွက်ကာ မောင့် နေလည်စာ ထမင်းဘူးကို ပြင်ဆင်ရသည်။ ထမင်းအိုးထဲမှ ထမင်းကို ဘူးထဲသို့ ထည့်ကာ အငွေ့ သတ်စေလိုက်သည်။ အငွေ့ကုန်ကာမှ နွေးထားသည့် ကြက်သားဟင်းကို ထည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ပြင်ဆင်ထားသော ပေါင်မုန့် ကြက်ဥကြော် နှင့် ကော်ဖီကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။ မောင်ကရေချိုးပြီးစ တဘက်တစ်ထည်ကို ခါးမှာပတ် တဘက်တစ်ထည်ကို ခေါင်းမှာသုတ်ကာ ထမင်းစားခန်းသို့ဝင်လာသည်။ “အဲဒါတွေကြောင့်မိန်းမကို ချစ်နေရတာ” ဆိုပြီး ပါးပြင်ပေါ်သို့ အနမ်းတင် ပြန်သည်…”ကဲ မြန်မြန်လုပ် အဘ တုံးလုံးကြီးနဲ့ အအေးပတ်နေအုံးမယ်” “မ..ရော မစားဘူးလား…” “ခုနက ပေါင်မုန့် တစ်ချပ် မြည်းရင်းနဲ့ စားထားတယ်မောင် ၊ မောင် ယူနီဖောင်း သွားထုတ်လိုက် အုံးမယ်၊ စားပြီး အင်္ကျီမြန်မြန်ဝတ်ပြီး သွားတော့နော်..ဘတ်(စ်)ကား ကလည်း စောင့်ရဦးမှာနဲ့ မြန်မြန်စား..” ဟုပြောကာ မောင့်အတွက် အင်္ကျီကို ဘီရိုတွင်းမှ ထုတ်ရန် အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ဝင်လိုက်သည်။ “မကလေ.. အဖွားကြီးပေါက်စနဲ့ တော်တော်တူတာပဲ… ပွစိပွစိနဲ့ ပြောတယ်…ဟဲ..” ဟု ထမင်းစားခန်းမှ အော်ပြောလေသည်။ “အောင်မယ်…အခုတော့ အဖွားကြီးပေါက်စလို့ ပြောပြီပေါ့လေ.. အရင်က ဒီလေသံမျိုး မဟုတ်ပါဘူးနော်..” ဟု အသံကိုထိန်းကာ ပြောလိုက်သော်လည်း မောင်က ကျွန်မ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားသည်ကို သိသည်။ ပေါင်မုန့် ကြက်ဥကြော်ကို ပလုတ်ပလောင်း စားပြီး ကော်ဖီခွက်ကို ကိုင်ကာ အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာလေသည်။ “မ..ကလည်းကွာ.. စတဲ့ဟာကို.. မောင်စတတ်တာကို သိသားနဲ့ကွာ.. စိတ်မကောင်း မဖြစ်နဲ့နော်..” “ရပါတယ် မောင်ရယ်.. မ .. သိပါတယ်…ကော်ဖီကုန်အောင်သောက်.. ခွက်ပေး..နောက်ပြီး အင်္ကျီ လဲတော့နော်.. ” “အင်း.. ရော့..” လက်ကျန် ကော်ဖီကို မော့သောက်လိုက်ကာ ခွက်အား ကျွန်မကို ပေးလိုက်သည်။ ကော်ဖီခွက်ကို မှန်တင်ခုံပေါ်တွင် တင်ကာ မောင် အင်္ကျီလဲနေသည်ကို ကျွန်မ အိပ်ရာပေါ်မှ ထိုင်ကာ ကြည့်နေသည်။ ကျွန်မ၏ မောင်သည် အတော်ကြည့်၍ ကောင်းသည်။ ချစ်သောမျက်စိနှင့် ကြည့်လို့တော့ မဟုတ်ပါ။ မောင့်တွင် စူးရှရှ မျက်ဝန်းတစ်စုံ ရှိသည်။ ယောက်ျားပီသသော မေးရိုးကားကား ရှိသည်။ စွဲဆောင်မှုရှိသော ပုရိသကိုယ်လုံး ရှိသည်။ ကျွန်မ ခိုဝင်လိုက်သော အခါတိုင်း အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသည့် ခွန်အားတို့ကို ရရှိစေသော ရင်ခွင်တစ်ခုနှင့် လက်မောင်း တစ်စုံတို့ကို မောင် ပိုင်ဆိုင်လေသည်။ စကားပြောတိုင်း အသက်ပါအောင် ပြုံးတတ်သော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ရှိသည်။ “ဟေ.. ဘောင်းဘီ ဝတ်မလို့ အပြင်ထွက်ပေးမလား…” “မထွက်ပေးပေါင်… ကိုယ့်ယောက်ျား အဝတ်လဲတာ မကြည့်ရဘူးလို့ ဘယ်တရား ဥပဒေမှာမှ မရှိဘူး..” “မ .. ကတော့ လုပ်ပြီ.. အဲဒါဆိုလဲ ပုဆိုးအရင်ဝတ်ပြီးမှ လဲတာပေါ့..” ပုဆိုးစကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ကာ မောင်က ဘောင်းဘီကို ဝတ်လေသည်။ မျက်ဝန်းတို့၌ ရွှန်းလဲ့သော အချစ်တို့ဖြင့် ထုံမွှမ်းနေသည်။ “မောင်ရယ်.. အရမ်းချစ်လိုက်တာ…” ” အင်း… မောင်လည်း အတူတူပါပဲ.. ချစ်တယ်..ကဲ.. ပြီးပြီ.. သွားတော့မယ်.. ညနေ ပြန်လာမှ အဲဒီ ချစ်တဲ့အကြောင်း သေချာပြောမယ်” “မောင်.. နော်.. ” အဲဒီလို ပြီတီတီနှင့် မောင် စလျှင် ကျွန်မ ရှက်သည်။ မောင့်ကို ကားမှတ်တိုင်အထိ လိုက်ပို့ကာ ဘတ်စ်ကားကို အတူတူ စောင့်သည်။ ကားရောက်လာသော အခါတွင် မောင်ကကျွန်မ နဖူးကို တစ်ချက်နမ်းပြီး နှုတ်ဆက်ကာ ကားပေါ် တက်သွားလေပြီ..။ ကားအဆုံးထိသို့ လိုက်ကြည့်နေကာကျွန်မ သက်ပြင်းချလိုက် မိပြန်သည်။ ဤလို ကျန်ရစ်နေသော နေ့များ ဘာလိုလိုနှင့် နှစ်လကျော်သုံးလနီးပါး ရောက်ရှိလာပြီ.. ရောက်ကတည်းက အလုပ်ကို ကြိုးစား ရှာခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည်မှMBA မဟာစီးပွားရေး ဘွဲ့ရ ကျွန်မအတွက် ဤစင်္ကာပူတွင် အလုပ်ရှာရ အတော်ခက်ပေသည်။ မောင်နှင့်လက်ထပ် မှတ်ပုံတင်ပြီး PR ဆိုသည့် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထား သည်မှာလည်း မကျသေးပေ။အင်းလေ.. ဒီလိုပဲ ရုန်းကန်ရမှာပေါ့ လို့ အားတင်းကာ မောင့်ကိုပြုစု ထမင်းဟင်းချက်ပေးရင်အချိန်ကုန် လာခဲ့သည်။ အခုလည်းအလုပ်ကြော်ငြာများ ပါတတ်သော Straits Time သတင်းစာကို ဝယ်ရန် တိုက်တစ်တိုက်ကျော်ရှိ ကုလားဆိုင်လေးသို့ လာခဲ့သည်။ သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ဝယ်ကာ ကျွန်မအိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် HIV/AIDS ကူးစက်ခြင်းများ အကြောင်းကို စာလုံးကြီးကြီးနှင့် ပါရှိသည်။ အိုလံပစ်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားများ အကြောင်းလည်း ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်မ မဖတ်အားသေးပါ။ ပထမဆုံး ဖတ်သည်က အလုပ်ကြော်ငြာ ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ သောကြာနေ့တွင်အလုပ်ကြော်ငြာ နည်းသည်။ မနက်ဖြန် စနေနေ့တွင်တော့ အလုပ်ကြော်ငြာ အပိုတစ်အုပ် သက်သက်ပါလေသည်။ ဒီနေ့လည်း ကျွန်မနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်ရှာ မတွေ့ပေ။ အလုပ်ကြော်ငြာ ဖတ်ပြီးကာမှသတင်းစာကို ဖတ်သည်။
“အေအိုင်ဒီအက်စ်တိုးပွားနှုန်းက ကမ္ဘာမှာ ပိုမိုတိုးပွားလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၀၇ တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ HIV ရောဂါဖြစ်သူ ၄၂၃ ယောက် ထပ်တိုးသည်။ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယောက်ျားများ ဖြစ်ကြသည်။ စင်္ကာပူတွင်၃၄၈၃ ယောက်၌ HIV ပိုးရှိသည်။ ကူးစက်သူများ၏ ၉၅ ရာနှုန်းမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးခြင်းဖြစ်သည်။”ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနှင့် ကျွန်မ လန့်လာသည်။ ကျွန်မမှာများ ရှိနေမည်လားဟု စိတ်မှ လန့်လာသည်။ရှိစရာတော့ အကြောင်း မရှိပေ။ ကျွန်မမှာ မောင် တစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိတာပဲလေ။ တကယ်လို့ မောင့်မှာအဲဒီပိုး ရှိနေခဲ့ရင်ရော… ဟဲ့.. ဖွဟဲ့..ဖွဟဲ့.. မတွေးကောင်းတာတွေ ကျွန်မ တွေးနေမိပါလား…။ “ကျွန်မကလင်ယောက်ျား အပေါ်မှာ သစ္စာရှိတာပဲ.. စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး” လို့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍမှာ တွေ့လိုက်ရသည်။စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အဖြေမှာ “ဝမ်းနည်းစရာတော့ ကောင်းပါတယ်၊ ရောဂါကူးစက်သူ အမျိုးသမီးအများစုဟာ သူတို့ လင်ယောက်ျားတွေက တဆင့် ကူးစက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လင်ယောင်္ကျား အပေါ်မှာ သစ္စာရှိပေမယ့် သူတို့ လင်ယောင်္ကျား တွေကတော့ သူတို့အပေါ်မှာ သစ္စာမရှိခဲ့ကြဘူး” … ကျွန်မ ခေါင်းမိုက်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မောင်ရော.. ကျွန်မအပေါ် ဘယ်အတိုင်း အတာထိ သစ္စာရှိပါသလဲ.. သစ္စာရှိခဲ့ပါသလဲ.. ကျွန်မနှင့် ဝေးနေချိန်များမှာ မောင် ဘယ်လိုနေပါသလဲ…မောင် မဖောက် ပြန်နိုင်ဘူးလား…ယောက်ျားပဲလေ ဆိုပြီး စိတ်ဖြေရာ ရှာကြသူများထဲမှာ မောင်မပါနိုင်ဘူးလား…။
တကယ်လို့ မောင့်မှာ ရှိနေရင်.. ကျွန်မမှာပါ ရှိနေပြီပေါ့… ဒါဆို.. နောက် ဆယ်နှစ်လောက်ဆို.. သေရတော့ မယ်ပေါ့… ကျွန်မ ရင်တွေပူလာသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေပုလင်းကိုယူကာ မော့သောက် လိုက်သည်။ သတင်းစာကို ဆက်မဖတ်တော့ဘဲ ကျွန်မ အတွေးတွေ ယောက်ယက် ခက်နေသည်။ မောင့်ကို ကျွန်မ မေးကြည့်ရင် ကောင်းမလား… ဘယ်လို မေးရပါမလဲ… မေးဖို့ရာ မရဲ..။ ဆေးခန်းကို သွားစစ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား.. ဒါပေမယ့်..အဲဒီ HIV ဆိုတဲ့ ပိုးက ၃ လ ကနေ ၆ လကြား မပေါ်ဘဲ နေတတ်သတဲ့..။ မောင့်ကိုအရင် စစ်ကြည့်ခိုင်းရင် ကောင်းမလား… ဘယ်လို ပြောပြီး ဆေးစစ်ခိုင်းရမလဲ…။ ကျွန်မအိမ်ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ မောင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်လိုက်သည်။ တတီတီ မြည်သံကို ခဏတာမျှ ကြားရပြီး ” မ လား.. “မောင့် အသံထွက်လာသည်။ ” မ.. ဘာဖြစ်နေတာလဲ.. စကားပြောလေ..” “မောင်…” “ပြောလေ.. မ.. ရဲ့..အလုပ် နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်” “အဲဒါဆိုနောက်မှ ပြောတော့မယ်..” “ရပါတယ်ကွာ.. ခုပြောပါ.. ဘာဖြစ်နေတာလဲ..” “မောင့်ကို မေးစရာ ရှိလို့..” “အောင်မယ်.. ငါ့မိန်းမက စကားတွေခံလို့ .. မေး.. ဘာမေးမှာလဲ..” “စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. မောင်.. မောင် HIV ရှိမရှိ စစ်ဖူးလားလို့.. မေးမလို့..” “အမ်… မ.. ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီမေးခွန်း မေးတာလဲ..” “မဟုတ်ပါဘူး… ဒီမှာ HIV အကြောင်း သတင်းစာမှာ ဖတ်မိလို့ မောင့်ကို မေးကြည့်တာ.. အရေးမကြီး ပါဘူး..” “အရင်၂၀၀၆ လောက်ကတော့ စစ်ဖူးတယ်..” “ဘာလို့ စစ်တာလဲဟင်.. မောင်… မောင်က အပျော်အပါး လိုက်စားမိလို့လား..” “အော်.. မိန်းမနှယ်… ဘာတွေ လာမေးနေမှန်း မသိပါဘူး…” “ထားပါ…မ နားလည်နိုင်ပါတယ်… အဲလိုစစ်ပြီးတဲ့ နောက်ရော မောင်ကင်းရှင်းရဲ့လား…” ” မ ရယ်.. သဝန်တို နေတာလား… မောင်က မရဲ့ ယောက်ျား ဖြစ်နေပြီလေ..” “သဝန်တိုတာ မဟုတ်ဘူး မောင်… စိတ်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်လို့ပါ….မ ကို နားလည်ပေးပါ..” “ဒါဆို.. မနက်ဖြန် သွားစစ်မယ်.. ဟုတ်လား.. စိတ်ချမ်းချမ်း သာသာနေ..” “ကျေးဇူးပါ.. မောင်..” “အဲဒါဆို.. ဖုန်းချ လိုက်တော့မယ်နော်.. လျှောက်တွေး မနေနဲ့ဦး..” “ဟုတ်…” ဖုံးကိုချလိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော် တွေးမိသည်။ မ.. စိတ်ပူမှ အဲဒီကိစ္စ စိတ်ပူရမှန်း သတိရမိသည်။
၂၀၀၆ လောက်က ဆေးစစ် ထားတုန်းကတော့ ဘာမှမရှိ။ HIV လည်း မရှိ။ HB လည်း မရှိ။ ဒါပေမယ့်.. ဟိုတစ်ခေါက် ရန်ကုန်ပြန်တုန်းကတော့ အပျော်တစ်ခါ လိုက်မိသေးသည်။ ရန်ကုန်မှာက အပျော် မိန်းကလေးတွေက တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပေါလာသည်။ နိုင်ငံခြားက အလည် ပြန်လာတာ ဆိုတော့လည်း ရန်ကုန်တွင် ငွေသုံးရ လွယ်သည်။ ဘီယာလေး အရက်ကလေး ဝင်လာတော့ ရှိုးလျှောက်တဲ့ မိန်းကလေးများကလည်း လှမှလှ ဆိုတော့ ပျော်မိတာပေါ့… ။ နောက်တစ်နေ့မှ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့.. “ဟေ့ကောင်.. အဲဒီက ကောင်မလေးတွေကို သတိထားဟ.. A ကိုက်လိမ့်မယ်.. ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများတော့ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကြွေကုန်ပြီ..” လို့ သတိပေးပေမယ့် လွန်ပြီးမှတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်လေးငါးလကြာတော့မှ မ က စင်္ကာပူကို ရောက်လာပြီး လက်ထပ်ဖြစ်တယ်။ လက်မထပ်ခင်က သွေးစစ် ကြည့်မလို့ကို မစစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု.. မ ပြောမှ စိတ်တောင် ပူလာပြီ.. ဒီရက်ပိုင်း တောင်မှ ဝမ်းပျက်သလို ခဏ ခဏ ဖြစ်နေတာ အဲဒါကြောင့်မို့လား မသိဘူး.. ။ မြန်မာ ပြည်မှာကလည်း A ကိုက်သူက လူဦးရေ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ အင်တာနက် တစ်နေရာမှာ ဖတ်ဖူးတယ်..။
ဟူး… ရှိနေခဲ့ရင်….။ ဆေးခန်းထဲကိုကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်တူတူ လျှောက်ဝင် လာခဲ့သည်။ တစ်ယောက် လက်ကို တစ်ယောက် တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ကောင်တာကို ဝင်ပြီး HIV စစ်ချင်လို့လို ပြောတော့ မောင့် အသံတွေ တုန်နေသလိုပါပဲ..။ “မ HB အသဲရောင် အသားဝါ ကူးစက်ရောဂါ ပိုးလည်း စစ်လိုက်မယ်နော်..” ” အင်း .. ကောင်းတာပေါ့..” “HB ပါ စစ်ချင်တယ်…” လို့ မောင်က ကောင်တာက ကောင်မလေးကို ထပ်ပြောလိုက်သည်။ စင်္ကာပူမှာက HIV စစ်မယ်ဆို ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးရသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဖို့ စောင့်နေရသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် နံပါတ်လေးမှာ မောင်ယူထားသည့် နံပါတ် ပေါ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ဆရာဝန် အခန်းထဲသို့ တံခါးခေါက်ကာ ဝင်လိုက်သည်။ “ထိုင်ပါ.. ကျွန်တော် ဘာ ကူညီရမလဲ” “ကျွန်တော် HIV နဲ့ HB ရှိမရှိ စစ်ချင်လို့ပါ..” “ရပါတယ်.. ဘာလို့များ စစ်ချင်တာလဲ..” “သူက စစ်ခိုင်းလို့..” “ဟား..ဟာ.. သူက စစ်ခိုင်းတယ် ဆိုတော့.. ခင်ဗျားတို့က မင်္ဂလာဆောင်တော့ မှာပေါ့.. ကွန်ဂရက် ကျူလေးရှင်းဗျာ” “ကျွန်တော်တို့ လင်မယားပါ ဒေါက်တာ..” “သြော်… အဲဒါဆို ခင်ဗျားတို့ မယူခင်က ဘာလို့ မစစ်တာလဲ” ” အဲဒီတုန်းက စစ်ဖို့ သတိမရဘူး ခင်ဗျ.. မနေ့ကမှ သူက သတင်းစာ ဖတ်ပြီးပြောလို့ လာစစ်တာပါ” “အင်း.. ကောင်းပါတယ်ဗျာ.. HIV, HB အပြင် တခြား STD တွေရော မစစ်ချင်ဘူးလား..” “ဟုတ်ကဲ့.. စစ်ချင်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ ဒေါက်တာ.. အရင် ၂၀၀၇ လောက်က ကျွန်တော် သွေးလှူတော့ သွေးလှူဘဏ်က ကျွန်တော့် သွေးမှာ HBC အသည်းရောင် အသားဝါ C ပိုး ရှိလို့လား ဘာလို့လည်း မသိဘူး.. သုံးလို့မရဘူးလို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ..” “ဟုတ်လား.. တကယ်က HBC က ကာမဆက်ဆံခြင်း ကလည်း ကူးနိုင်တယ်.. ဒါပေမယ့် သွေးလှူဘဏ်က Full blood count နည်းတဲ့သွေးကို မသုံးတတ်ဘူး..အဲဒါပါ စစ်လို့ရတယ်.. စစ်မလား..” “ဟုတ်ကဲ့.. စစ်ချင်ပါတယ်..” “အဖြေက နောက်တစ်ပတ်နေမှ သိရမယ်…။ ရောဂါပိုး မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်.. ခင်ဗျားမိန်းမ ပေါ်မှာ သစ္စာရှိရှိ နေပါ..” “ဟုတ်ကဲ့” “တကယ်လို့ ပိုး ရှိခဲ့ရင်တော့ ဒီက ညီမလည်း သွေးလာစစ် ရလိမ့်မယ်နော်၊ ကြိုပြီး သတိ ပေးထားတာပါ..” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ရပါတယ်..” “ကဲ.. ဒါဆိုရင်..သွေးဖောက်တဲ့နေရာကို သွားလို့ရပါပြီ.. ကံကောင်းပါစေဗျာ..” နာစ့်မ က မောင့် လက်ဖျံကို ဂွမ်းနှင့်သုတ်အပြီး သွေးစုတ်ထုတ်ရန် အပ်ကို စိုက်ထည့်လိုက်သည်။ နီရဲသော သွေးတို့ ဘူးလေးထဲသို့ တရှိန်ထိုး ဝင်ရောက် သွားကြသည်။ တစ်ဘူး.. နှစ်ဘူး…သုံးဘူး…။ နောက်ပြီး STD အတွက် ဆီးကို လည်းယူသည်။ အားလုံးပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ဆေးခန်း အတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ မောင်က ကျွန်မနဖူးကို အသာ နမ်းကာ “ဆောရီးပဲမ.. မောင်သာ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေရင် ဒီလို စိတ်ပူနေရမှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ တိုးတိုးလေး ဆိုသည်။ “မောင်ရယ်.. ရပါတယ်… တကယ်လို့သာ သေခြင်းတရားဆိုတာကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါ မောင်နဲ့ တူတူရင်ဆိုင်ရတာပဲ… မ..ကျေနပ်ပါတယ် အဖြေက နောက်တစ်ပတ်မှ သိရမှာပါ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မောင်ရယ်.. ကျွန်မ မောင့်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်” နောက်တစ်ပတ်ကို ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ရင်ထိတ်စွာနှင့်ပင် စောင့်စားလျက် ရှိကြသည်…။ အဖြေ.. ဘာဖြစ်လာမည်နည်း ဆိုတာကို ကျွန်မ မတွေးတော နေချင်တော့ပါ.. အကောင်းဆုံးကိုတော့ မျှော်လင့်ထားသလို အဆိုးဆုံး ဆိုတာကိုလည်း….။ ကျွန်မဘေးတွင် မောင်ရှိနေသည်။ မောင်နှင့်အတူ အရာရာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရမည်… မောင့်ရင်ခွင်တွင်းမှာ မှေးစက်ခွင့်လေးတွေ ရနိုင်သလောက် ကျွန်မ မှေးစက်ချင်သေးသည်။
“ခဏပါကှာ…. ဆယျမိနဈ.. ဆယျမိနဈ..ပဲ...” ” မောငျကလဲကှာ .... နစေ့ဉျလုပျနကွေအစီအစဉျတို့အတိုငျး မနကျ ငါးနာရီခှဲတှငျ ထကာ မောငျအတှကျ နံနကျစာကို ပွငျဆငျထားသညျ။ နလေ့ညျစာ အတှကျ ထမငျးဘူးထညျ့ရနျ ထမငျးအိုးကို ခလုတျ နှိပျထားလိုကျသညျ။ မနေ့ ညနကေ ခကျြကာ ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားသော ကွကျသားဟငျးကို မိုကျကရိုဝေ့(ဖျ) လြှပျစဈ မီးဖိုထဲသို့ ထညျ့လိုကျသညျ။ ခလုတျကို နှိပျထားလိုကျသညျ။ ခွောကျနာရီတှငျမောငျ့ကို အနမျးဖှဖှလေးဖွငျ့ နိုးထစသေညျ။ မောငျက အိပျနလြှေငျ စူစူလေး ဖွဈနသေော နှုတျခမျးလေးကိုမကျြနှာသဈပွီးစ ကြှနျမပါးလေးနှငျ့ ထိကပျလိုကျသော အခါတှငျ..” မ.. ခွောကျနာရီ ထိုးပွီလားကှာ…အိပျရေး မဝသေးဘူးကှာ…” “ထိုးနပွေီ.. ထတော့ဆရာ… အလုပျနောကျကြ နအေုံးမယျ…” “ခဏကှာ…. ဆယျမိနဈ.. ဆယျမိနဈ..” ” မောငျကလဲကှာ မနကျဖွနျ စနပေဲ ရောကျတော့မယျ.. စနေ၊ တနင်ျဂနှမှေ ဝအောငျ အိပျနျော” ကြှနျမ အတငျးနှိုးသော အခါမှ မောငျသညျ သူ့ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို ဆနျ့တနျးကာ ဝါးခနဲ တဈခကျြ သမျးလိုကျပွနျသညျ။
ကြှနျမက လကျနှဈဖကျကို တနျးကာ ပေးလိုကျတော့ ကလေးငယျတဈယောကျလို ပကေပျကပျ လုပျနပွေနျသညျ။ နောကျတော့ ရုတျတရကျ ထထိုငျကာ “မောငျ မကျြနှာသဈ ရခြေိုးတော့မယျ..မ မီးဖိုမှာ လုပျစရာရှိစရာ သှားလုပျတော့” ဆိုကာ ကြှနျမ နဖူးလေးကို သူ့နှုတျခမျးဖွငျ့ ထိကပျကာ နမျးလိုကျသညျ။ ကြှနျမလညျး အိပျခနျးမှ ထှကျကာ မောငျ့ နလေညျစာ ထမငျးဘူးကို ပွငျဆငျရသညျ။ ထမငျးအိုးထဲမှ ထမငျးကို ဘူးထဲသို့ ထညျ့ကာ အငှေ့ သတျစလေိုကျသညျ။ အငှကေု့နျကာမှ နှေးထားသညျ့ ကွကျသားဟငျးကို ထညျ့လိုကျသညျ။ ထို့နောကျပွငျဆငျထားသော ပေါငျမုနျ့ ကွကျဥကွျော နှငျ့ ကျောဖီကို ထမငျးစား စားပှဲပျေါသို့ တငျထားလိုကျသညျ။ မောငျကရခြေိုးပွီးစ တဘကျတဈထညျကို ခါးမှာပတျ တဘကျတဈထညျကို ခေါငျးမှာသုတျကာ ထမငျးစားခနျးသို့ဝငျလာသညျ။ “အဲဒါတှကွေောငျ့မိနျးမကို ခဈြနရေတာ” ဆိုပွီး ပါးပွငျပျေါသို့ အနမျးတငျ ပွနျသညျ…”ကဲ မွနျမွနျလုပျ အဘ တုံးလုံးကွီးနဲ့ အအေးပတျနအေုံးမယျ” “မ..ရော မစားဘူးလား…” “ခုနက ပေါငျမုနျ့ တဈခပျြ မွညျးရငျးနဲ့ စားထားတယျမောငျ ၊ မောငျ ယူနီဖောငျး သှားထုတျလိုကျ အုံးမယျ၊ စားပွီး အင်ျကြီမွနျမွနျဝတျပွီး သှားတော့နျော..ဘတျ(ဈ)ကား ကလညျး စောငျ့ရဦးမှာနဲ့ မွနျမွနျစား..” ဟုပွောကာ မောငျ့အတှကျ အင်ျကြီကို ဘီရိုတှငျးမှ ထုတျရနျ အိပျခနျးတှငျးသို့ ဝငျလိုကျသညျ။ “မကလေ.. အဖှားကွီးပေါကျစနဲ့ တျောတျောတူတာပဲ… ပှစိပှစိနဲ့ ပွောတယျ…ဟဲ..” ဟု ထမငျးစားခနျးမှ အျောပွောလသေညျ။ “အောငျမယျ…အခုတော့ အဖှားကွီးပေါကျစလို့ ပွောပွီပေါ့လေ.. အရငျက ဒီလသေံမြိုး မဟုတျပါဘူးနျော..” ဟု အသံကိုထိနျးကာ ပွောလိုကျသျောလညျး မောငျက ကြှနျမ စိတျမကောငျး ဖွဈသှားသညျကို သိသညျ။ ပေါငျမုနျ့ ကွကျဥကွျောကို ပလုတျပလောငျး စားပွီး ကျောဖီခှကျကို ကိုငျကာ အိပျခနျးတှငျးသို့ ဝငျလာလသေညျ။ “မ..ကလညျးကှာ.. စတဲ့ဟာကို.. မောငျစတတျတာကို သိသားနဲ့ကှာ.. စိတျမကောငျး မဖွဈနဲ့နျော..” “ရပါတယျ မောငျရယျ.. မ .. သိပါတယျ…ကျောဖီကုနျအောငျသောကျ.. ခှကျပေး..နောကျပွီး အင်ျကြီ လဲတော့နျော.. ” “အငျး.. ရော့..” လကျကနျြ ကျောဖီကို မော့သောကျလိုကျကာ ခှကျအား ကြှနျမကို ပေးလိုကျသညျ။ ကျောဖီခှကျကို မှနျတငျခုံပျေါတှငျ တငျကာ မောငျ အင်ျကြီလဲနသေညျကို ကြှနျမ အိပျရာပျေါမှ ထိုငျကာ ကွညျ့နသေညျ။ ကြှနျမ၏ မောငျသညျ အတျောကွညျ့၍ ကောငျးသညျ။ ခဈြသောမကျြစိနှငျ့ ကွညျ့လို့တော့ မဟုတျပါ။ မောငျ့တှငျ စူးရှရှ မကျြဝနျးတဈစုံ ရှိသညျ။ ယောကျြားပီသသော မေးရိုးကားကား ရှိသညျ။ စှဲဆောငျမှုရှိသော ပုရိသကိုယျလုံး ရှိသညျ။ ကြှနျမ ခိုဝငျလိုကျသော အခါတိုငျး အရာရာကို ရငျဆိုငျရဲသညျ့ ခှနျအားတို့ကို ရရှိစသေော ရငျခှငျတဈခုနှငျ့ လကျမောငျး တဈစုံတို့ကို မောငျ ပိုငျဆိုငျလသေညျ။ စကားပွောတိုငျး အသကျပါအောငျ ပွုံးတတျသော နှုတျခမျးတဈစုံ ရှိသညျ။ “ဟေ.. ဘောငျးဘီ ဝတျမလို့ အပွငျထှကျပေးမလား…” “မထှကျပေးပေါငျ… ကိုယျ့ယောကျြား အဝတျလဲတာ မကွညျ့ရဘူးလို့ ဘယျတရား ဥပဒမှောမှ မရှိဘူး..” “မ .. ကတော့ လုပျပွီ.. အဲဒါဆိုလဲ ပုဆိုးအရငျဝတျပွီးမှ လဲတာပေါ့..” ပုဆိုးစကို ပါးစပျနှငျ့ကိုကျကာ မောငျက ဘောငျးဘီကို ဝတျလသေညျ။ မကျြဝနျးတို့၌ ရှနျးလဲ့သော အခဈြတို့ဖွငျ့ ထုံမှမျးနသေညျ။ “မောငျရယျ.. အရမျးခဈြလိုကျတာ…” ” အငျး… မောငျလညျး အတူတူပါပဲ.. ခဈြတယျ..ကဲ.. ပွီးပွီ.. သှားတော့မယျ.. ညနေ ပွနျလာမှ အဲဒီ ခဈြတဲ့အကွောငျး သခြောပွောမယျ” “မောငျ.. နျော.. ” အဲဒီလို ပွီတီတီနှငျ့ မောငျ စလြှငျ ကြှနျမ ရှကျသညျ။ မောငျ့ကို ကားမှတျတိုငျအထိ လိုကျပို့ကာ ဘတျဈကားကို အတူတူ စောငျ့သညျ။ ကားရောကျလာသော အခါတှငျ မောငျကကြှနျမ နဖူးကို တဈခကျြနမျးပွီး နှုတျဆကျကာ ကားပျေါ တကျသှားလပွေီ..။ ကားအဆုံးထိသို့ လိုကျကွညျ့နကောကြှနျမ သကျပွငျးခလြိုကျ မိပွနျသညျ။ ဤလို ကနျြရဈနသေော နမြေ့ား ဘာလိုလိုနှငျ့ နှဈလကြျောသုံးလနီးပါး ရောကျရှိလာပွီ.. ရောကျကတညျးက အလုပျကို ကွိုးစား ရှာခဲ့သျောလညျး မွနျမာပွညျမှMBA မဟာစီးပှားရေး ဘှဲ့ရ ကြှနျမအတှကျ ဤစင်ျကာပူတှငျ အလုပျရှာရ အတျောခကျပသေညျ။ မောငျနှငျ့လကျထပျ မှတျပုံတငျပွီး PR ဆိုသညျ့ အမွဲတမျး နထေိုငျခှငျ့ လြှောကျထား သညျမှာလညျး မကသြေးပေ။အငျးလေ.. ဒီလိုပဲ ရုနျးကနျရမှာပေါ့ လို့ အားတငျးကာ မောငျ့ကိုပွုစု ထမငျးဟငျးခကျြပေးရငျအခြိနျကုနျ လာခဲ့သညျ။ အခုလညျးအလုပျကွျောငွာမြား ပါတတျသော Straits Time သတငျးစာကို ဝယျရနျ တိုကျတဈတိုကျကြျောရှိ ကုလားဆိုငျလေးသို့ လာခဲ့သညျ။ သတငျးစာ တဈစောငျကို ဝယျကာ ကြှနျမအိမျသို့ ပွနျလာခဲ့သညျ။ သတငျးစာ မကျြနှာဖုံးတှငျ HIV/AIDS ကူးစကျခွငျးမြား အကွောငျးကို စာလုံးကွီးကွီးနှငျ့ ပါရှိသညျ။ အိုလံပဈပှဲတှငျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ စင်ျကာပူ နိုငျငံသားမြား အကွောငျးလညျး ပါသညျ။ သို့သျော ကြှနျမ မဖတျအားသေးပါ။ ပထမဆုံး ဖတျသညျက အလုပျကွျောငွာ ဖွဈသညျ။ ဒီနေ့ သောကွာနတှေ့ငျအလုပျကွျောငွာ နညျးသညျ။ မနကျဖွနျ စနနေတှေ့ငျတော့ အလုပျကွျောငွာ အပိုတဈအုပျ သကျသကျပါလသေညျ။ ဒီနလေ့ညျး ကြှနျမနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ အလုပျရှာ မတှပေ့ေ။ အလုပျကွျောငွာ ဖတျပွီးကာမှသတငျးစာကို ဖတျသညျ။
“အအေိုငျဒီအကျဈတိုးပှားနှုနျးက ကမ်ဘာမှာ ပိုမိုတိုးပှားလာသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့နှဈ ၂၀၀၇ တှငျ စင်ျကာပူနိုငျငံ၌ HIV ရောဂါဖွဈသူ ၄၂၃ ယောကျ ထပျတိုးသညျ။ ၉၃ ရာခိုငျနှုနျးမှာ ယောကျြားမြား ဖွဈကွသညျ။ စင်ျကာပူတှငျ၃၄၈၃ ယောကျ၌ HIV ပိုးရှိသညျ။ ကူးစကျသူမြား၏ ၉၅ ရာနှုနျးမှာ လိငျဆကျဆံခွငျးမှ ကူးခွငျးဖွဈသညျ။”ဖတျရငျးဖတျရငျးနှငျ့ ကြှနျမ လနျ့လာသညျ။ ကြှနျမမှာမြား ရှိနမေညျလားဟု စိတျမှ လနျ့လာသညျ။ရှိစရာတော့ အကွောငျး မရှိပေ။ ကြှနျမမှာ မောငျ တဈယောကျတညျးပဲ ရှိတာပဲလေ။ တကယျလို့ မောငျ့မှာအဲဒီပိုး ရှိနခေဲ့ရငျရော… ဟဲ့.. ဖှဟဲ့..ဖှဟဲ့.. မတှေးကောငျးတာတှေ ကြှနျမ တှေးနမေိပါလား…။ “ကြှနျမကလငျယောကျြား အပျေါမှာ သစ်စာရှိတာပဲ.. စိတျပူစရာမလိုပါဘူး” လို့ အမေးအဖွေ ကဏ်ဍမှာ တှလေို့ကျရသညျ။စိတျဝငျတစား ဖတျကွညျ့လိုကျတော့ အဖွမှော “ဝမျးနညျးစရာတော့ ကောငျးပါတယျ၊ ရောဂါကူးစကျသူ အမြိုးသမီးအမြားစုဟာ သူတို့ လငျယောကျြားတှကေ တဆငျ့ ကူးစကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ သူတို့တှဟော လငျယောင်ျကြား အပျေါမှာ သစ်စာရှိပမေယျ့ သူတို့ လငျယောင်ျကြား တှကေတော့ သူတို့အပျေါမှာ သစ်စာမရှိခဲ့ကွဘူး” … ကြှနျမ ခေါငျးမိုကျခနဲ ဖွဈသှားသညျ။ မောငျရော.. ကြှနျမအပျေါ ဘယျအတိုငျး အတာထိ သစ်စာရှိပါသလဲ.. သစ်စာရှိခဲ့ပါသလဲ.. ကြှနျမနှငျ့ ဝေးနခြေိနျမြားမှာ မောငျ ဘယျလိုနပေါသလဲ…မောငျ မဖောကျ ပွနျနိုငျဘူးလား…ယောကျြားပဲလေ ဆိုပွီး စိတျဖွရော ရှာကွသူမြားထဲမှာ မောငျမပါနိုငျဘူးလား…။
တကယျလို့ မောငျ့မှာ ရှိနရေငျ.. ကြှနျမမှာပါ ရှိနပွေီပေါ့… ဒါဆို.. နောကျ ဆယျနှဈလောကျဆို.. သရေတော့ မယျပေါ့… ကြှနျမ ရငျတှပေူလာသညျ။ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ ရပေုလငျးကိုယူကာ မော့သောကျ လိုကျသညျ။ သတငျးစာကို ဆကျမဖတျတော့ဘဲ ကြှနျမ အတှေးတှေ ယောကျယကျ ခကျနသေညျ။ မောငျ့ကို ကြှနျမ မေးကွညျ့ရငျ ကောငျးမလား… ဘယျလို မေးရပါမလဲ… မေးဖို့ရာ မရဲ..။ ဆေးခနျးကို သှားစဈကွညျ့ရငျ ကောငျးမလား.. ဒါပမေယျ့..အဲဒီ HIV ဆိုတဲ့ ပိုးက ၃ လ ကနေ ၆ လကွား မပျေါဘဲ နတေတျသတဲ့..။ မောငျ့ကိုအရငျ စဈကွညျ့ခိုငျးရငျ ကောငျးမလား… ဘယျလို ပွောပွီး ဆေးစဈခိုငျးရမလဲ…။ ကြှနျမအိမျဖုနျးကို ကောကျကိုငျလိုကျကာ မောငျ့ ဖုနျးနံပါတျကို နှိပျလိုကျသညျ။ တတီတီ မွညျသံကို ခဏတာမြှ ကွားရပွီး ” မ လား.. “မောငျ့ အသံထှကျလာသညျ။ ” မ.. ဘာဖွဈနတောလဲ.. စကားပွောလေ..” “မောငျ…” “ပွောလေ.. မ.. ရဲ့..အလုပျ နညျးနညျးရှုပျနတေယျ” “အဲဒါဆိုနောကျမှ ပွောတော့မယျ..” “ရပါတယျကှာ.. ခုပွောပါ.. ဘာဖွဈနတောလဲ..” “မောငျ့ကို မေးစရာ ရှိလို့..” “အောငျမယျ.. ငါ့မိနျးမက စကားတှခေံလို့ .. မေး.. ဘာမေးမှာလဲ..” “စိတျမဆိုးနဲ့နျော.. မောငျ.. မောငျ HIV ရှိမရှိ စဈဖူးလားလို့.. မေးမလို့..” “အမျ… မ.. ဘာဖွဈလို့ အဲဒီမေးခှနျး မေးတာလဲ..” “မဟုတျပါဘူး… ဒီမှာ HIV အကွောငျး သတငျးစာမှာ ဖတျမိလို့ မောငျ့ကို မေးကွညျ့တာ.. အရေးမကွီး ပါဘူး..” “အရငျ၂၀၀၆ လောကျကတော့ စဈဖူးတယျ..” “ဘာလို့ စဈတာလဲဟငျ.. မောငျ… မောငျက အပြျောအပါး လိုကျစားမိလို့လား..” “အျော.. မိနျးမနှယျ… ဘာတှေ လာမေးနမှေနျး မသိပါဘူး…” “ထားပါ…မ နားလညျနိုငျပါတယျ… အဲလိုစဈပွီးတဲ့ နောကျရော မောငျကငျးရှငျးရဲ့လား…” ” မ ရယျ.. သဝနျတို နတောလား… မောငျက မရဲ့ ယောကျြား ဖွဈနပွေီလေ..” “သဝနျတိုတာ မဟုတျဘူး မောငျ… စိတျထဲမှာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သိခငျြလို့ပါ….မ ကို နားလညျပေးပါ..” “ဒါဆို.. မနကျဖွနျ သှားစဈမယျ.. ဟုတျလား.. စိတျခမျြးခမျြး သာသာနေ..” “ကြေးဇူးပါ.. မောငျ..” “အဲဒါဆို.. ဖုနျးခြ လိုကျတော့မယျနျော.. လြှောကျတှေး မနနေဲ့ဦး..” “ဟုတျ…” ဖုံးကိုခလြိုကျပွီးမှ ကြှနျတျော တှေးမိသညျ။ မ.. စိတျပူမှ အဲဒီကိစ်စ စိတျပူရမှနျး သတိရမိသညျ။
၂၀၀၆ လောကျက ဆေးစဈ ထားတုနျးကတော့ ဘာမှမရှိ။ HIV လညျး မရှိ။ HB လညျး မရှိ။ ဒါပမေယျ့.. ဟိုတဈခေါကျ ရနျကုနျပွနျတုနျးကတော့ အပြျောတဈခါ လိုကျမိသေးသညျ။ ရနျကုနျမှာက အပြျော မိနျးကလေးတှကေ တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ပေါလာသညျ။ နိုငျငံခွားက အလညျ ပွနျလာတာ ဆိုတော့လညျး ရနျကုနျတှငျ ငှသေုံးရ လှယျသညျ။ ဘီယာလေး အရကျကလေး ဝငျလာတော့ ရှိုးလြှောကျတဲ့ မိနျးကလေးမြားကလညျး လှမှလှ ဆိုတော့ ပြျောမိတာပေါ့… ။ နောကျတဈနမှေ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျနဲ့ တှတေ့ော့.. “ဟကေ့ောငျ.. အဲဒီက ကောငျမလေးတှကေို သတိထားဟ.. A ကိုကျလိမျ့မယျ.. ငါ့သူငယျခငျြးတှေ တျောတျောမြားမြားတော့ တဖွုတျဖွုတျနဲ့ ကွှကေုနျပွီ..” လို့ သတိပေးပမေယျ့ လှနျပွီးမှတော့ မတတျနိုငျတော့ဘူး။ နောကျလေးငါးလကွာတော့မှ မ က စင်ျကာပူကို ရောကျလာပွီး လကျထပျဖွဈတယျ။ လကျမထပျခငျက သှေးစဈ ကွညျ့မလို့ကို မစဈဖွဈခဲ့ဘူး။ အခု.. မ ပွောမှ စိတျတောငျ ပူလာပွီ.. ဒီရကျပိုငျး တောငျမှ ဝမျးပကျြသလို ခဏ ခဏ ဖွဈနတော အဲဒါကွောငျ့မို့လား မသိဘူး.. ။ မွနျမာ ပွညျမှာကလညျး A ကိုကျသူက လူဦးရေ၏ ၂ ရာခိုငျနှုနျးရှိတယျလို့ အငျတာနကျ တဈနရောမှာ ဖတျဖူးတယျ..။
ဟူး… ရှိနခေဲ့ရငျ….။ ဆေးခနျးထဲကိုကြှနျမတို့ နှဈယောကျတူတူ လြှောကျဝငျ လာခဲ့သညျ။ တဈယောကျ လကျကို တဈယောကျ တငျးတငျးဆုပျကိုငျထားသညျ။ ကောငျတာကို ဝငျပွီး HIV စဈခငျြလို့လို ပွောတော့ မောငျ့ အသံတှေ တုနျနသေလိုပါပဲ..။ “မ HB အသဲရောငျ အသားဝါ ကူးစကျရောဂါ ပိုးလညျး စဈလိုကျမယျနျော..” ” အငျး .. ကောငျးတာပေါ့..” “HB ပါ စဈခငျြတယျ…” လို့ မောငျက ကောငျတာက ကောငျမလေးကို ထပျပွောလိုကျသညျ။ စင်ျကာပူမှာက HIV စဈမယျဆို ဆရာဝနျနှငျ့ တှပွေီ့း ဆှေးနှေးရသညျ။ ဆရာဝနျနှငျ့ တှဖေို့ စောငျ့နရေသညျ။ ဒဈဂဈြတယျ နံပါတျလေးမှာ မောငျယူထားသညျ့ နံပါတျ ပျေါလာပွီ ဖွဈသညျ။ ကြှနျမတို့ နှဈယောကျ ဆရာဝနျ အခနျးထဲသို့ တံခါးခေါကျကာ ဝငျလိုကျသညျ။ “ထိုငျပါ.. ကြှနျတျော ဘာ ကူညီရမလဲ” “ကြှနျတျော HIV နဲ့ HB ရှိမရှိ စဈခငျြလို့ပါ..” “ရပါတယျ.. ဘာလို့မြား စဈခငျြတာလဲ..” “သူက စဈခိုငျးလို့..” “ဟား..ဟာ.. သူက စဈခိုငျးတယျ ဆိုတော့.. ခငျဗြားတို့က မင်ျဂလာဆောငျတော့ မှာပေါ့.. ကှနျဂရကျ ကြူလေးရှငျးဗြာ” “ကြှနျတျောတို့ လငျမယားပါ ဒေါကျတာ..” “သွျော… အဲဒါဆို ခငျဗြားတို့ မယူခငျက ဘာလို့ မစဈတာလဲ” ” အဲဒီတုနျးက စဈဖို့ သတိမရဘူး ခငျဗြ.. မနကေ့မှ သူက သတငျးစာ ဖတျပွီးပွောလို့ လာစဈတာပါ” “အငျး.. ကောငျးပါတယျဗြာ.. HIV, HB အပွငျ တခွား STD တှရေော မစဈခငျြဘူးလား..” “ဟုတျကဲ့.. စဈခငျြပါတယျ.. ဒါနဲ့ ဒေါကျတာ.. အရငျ ၂၀၀၇ လောကျက ကြှနျတျော သှေးလှူတော့ သှေးလှူဘဏျက ကြှနျတေျာ့ သှေးမှာ HBC အသညျးရောငျ အသားဝါ C ပိုး ရှိလို့လား ဘာလို့လညျး မသိဘူး.. သုံးလို့မရဘူးလို့ ပွောတယျခငျဗြ..” “ဟုတျလား.. တကယျက HBC က ကာမဆကျဆံခွငျး ကလညျး ကူးနိုငျတယျ.. ဒါပမေယျ့ သှေးလှူဘဏျက Full blood count နညျးတဲ့သှေးကို မသုံးတတျဘူး..အဲဒါပါ စဈလို့ရတယျ.. စဈမလား..” “ဟုတျကဲ့.. စဈခငျြပါတယျ..” “အဖွကေ နောကျတဈပတျနမှေ သိရမယျ…။ ရောဂါပိုး မတှပေ့ါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျး ပေးပါတယျ.. ခငျဗြားမိနျးမ ပျေါမှာ သစ်စာရှိရှိ နပေါ..” “ဟုတျကဲ့” “တကယျလို့ ပိုး ရှိခဲ့ရငျတော့ ဒီက ညီမလညျး သှေးလာစဈ ရလိမျ့မယျနျော၊ ကွိုပွီး သတိ ပေးထားတာပါ..” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့ ရပါတယျ..” “ကဲ.. ဒါဆိုရငျ..သှေးဖောကျတဲ့နရောကို သှားလို့ရပါပွီ.. ကံကောငျးပါစဗြော..” နာဈ့မ က မောငျ့ လကျဖြံကို ဂှမျးနှငျ့သုတျအပွီး သှေးစုတျထုတျရနျ အပျကို စိုကျထညျ့လိုကျသညျ။ နီရဲသော သှေးတို့ ဘူးလေးထဲသို့ တရှိနျထိုး ဝငျရောကျ သှားကွသညျ။ တဈဘူး.. နှဈဘူး…သုံးဘူး…။ နောကျပွီး STD အတှကျ ဆီးကို လညျးယူသညျ။ အားလုံးပွီးတော့ ကြှနျမတို့ နှဈယောကျ ဆေးခနျး အတှငျးမှ ထှကျလာခဲ့သညျ။ မောငျက ကြှနျမနဖူးကို အသာ နမျးကာ “ဆောရီးပဲမ.. မောငျသာ ကငျးကငျးရှငျးရှငျး နရေငျ ဒီလို စိတျပူနရေမှာ မဟုတျဘူး” လို့ တိုးတိုးလေး ဆိုသညျ။ “မောငျရယျ.. ရပါတယျ… တကယျလို့သာ သခွေငျးတရားဆိုတာကို ရငျဆိုငျရတဲ့ အခါ မောငျနဲ့ တူတူရငျဆိုငျရတာပဲ… မ..ကနြေပျပါတယျ အဖွကေ နောကျတဈပတျမှ သိရမှာပါ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ မောငျရယျ.. ကြှနျမ မောငျ့ကို အရမျးခဈြပါတယျ” နောကျတဈပတျကို ကြှနျမတို့ နှဈယောကျ ရငျထိတျစှာနှငျ့ပငျ စောငျ့စားလကျြ ရှိကွသညျ…။ အဖွေ.. ဘာဖွဈလာမညျနညျး ဆိုတာကို ကြှနျမ မတှေးတော နခေငျြတော့ပါ.. အကောငျးဆုံးကိုတော့ မြှျောလငျ့ထားသလို အဆိုးဆုံး ဆိုတာကိုလညျး….။ ကြှနျမဘေးတှငျ မောငျရှိနသေညျ။ မောငျနှငျ့အတူ အရာရာကို ရငျဆိုငျနိုငျရမညျ… မောငျ့ရငျခှငျတှငျးမှာ မှေးစကျခှငျ့လေးတှေ ရနိုငျသလောကျ ကြှနျမ မှေးစကျခငျြသေးသညျ။